လူမှုရှုခင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 115
မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထမင်းရှင် ဘယ်သူလဲ ရာမညသား ။ ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၂ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ ရှင်စောပုလမ်းအတွင်း တရားမဝင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေသော အနှိပ်ခန်းနှင့် အခြားသော မြိုင်သာယာရပ်ကွက်အတွင်းရှိ တရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော အနှိပ်ခန်းများအား တိုင်ကြားသော်လည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူဖယ်ရှားခြင်း မရှိသောကြောင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်မှ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများမှ လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တင်ပြခဲ့ရာ ၉-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် မိုးမခ အွန်လိုင်းမီဒီယာ၊ ၁၃-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် သစ်ထူးလွင် အွန်လိုင်းမီဒီယာ များတွင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ပါရှိခဲ့မှုကြောင့် ၁၅-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညတစ်နာရီခန့်တွင် မွန်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ အပါအဝင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၄၀ ခန့်ဖြင့် အယောင်ပြ ရှာဖွေပြခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အယောင်ပြရှာဖွေပြသောအချိန်တွင် မြိုင်သာယာရပ်ကွက်တစ်ခွင်ရှိ အနှိပ်ခန်းအသီးသီးမှာ...
ဂီတပညာရှင် တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ပြည့် မွေးနေ့ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်၏ ဂန္ထ၀င်ဂီတပညာရှင်၊ တေးသံရှင်၊ ဒေါ်မာမာအေး ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ချစ်ခင်သူ မိတ်ဆွေများနှင့် မုန့်စားကြရန် ကိုယ်တိုင်လက်ရေးနှင့် ဖိတ်စာပေးပို့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မိုးမခမီဒီယာက မိမိတို့၏ နာယက၊ မိခင်ကြီး ဒေါ်မာမာအေး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်စေရေး ဂီတအနုပညာဖြင့် ဆထက်တံပိုး အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီး ဂါရ၀ပြုလိုက်ပါသည်။ No tags for this post.
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စင်္ကာပူ၊ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ ၁၉၊ ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၂ နာရီက ၇ နာရီ စင်္ကာပူ ပိုလီကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ ဟောပြောမည်သူများ – အော်ပီကျယ်၊ ကျော်ဝင်း၊ မောင်ဝံသ လက်မှတ်များ – ၁၅၊ ၂၀၊ ၂၅ စင်္ကာပူဒေါ်လာ No tags for this post.
နှင်းမောင်(ဟင်္သာတ)၊ ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၂ DENKO ပုဂ္ဂလိကဆီဆိုင်များတွင် အင်းစိန်လိုမြို့ နယ်တွေမှာ တစ်နေ့ တစ်ဂါလံ ပဲရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နေ့ခင်း ၁၂း၀၀ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ဆီတင် ဘောက်ဆာကားမလားသေး၍ ဆီမရသေးပါဟု စာများ ထောင်ထားပါတယ်။ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ တစ်နေ့ ၂ ဂါလံ နှုန်းဖြင့် သုံးရက်စာ ထုတ်လို့ရနေသော်လည်း အခုလိုလုပ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မိမိစားဝတ်နေရေးအတွက် ကားဆွဲနေသောကားသမားများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၊ ပင်စင်စား လူကြီးများမှာ ဆီမရမချင်း နေ့တိုင်း လာပြီး တန်းစီနေရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အထက်လူကြီးများသိအောင် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ No tags for this post.
Page 115 of 126«1...113114115116117...126»